दुई वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज
माघ, काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले नविकरण नगर्ने दुई वटा इन्टर सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । खारेजीमा पर्नेमा आइटेल कम्युनिकेशन प्रालि जावलाखेल, ललितपुर र सेभेन स्टार नेट प्रालि पोखरा महानगरपालिका-३२ तल्लो गगनगौडा रहेका छन् । लाइसेन्स नवीकरणका लागि नियमानुसार निवेदन पेश नगरेकोले खारेज गरिएको प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दूरसञ्चार
इन्स्टाग्रामले आत्मघाती, भड्काउ तथा आपत्तिजनक सामाग्रीहरुलाई नाबालिक प्रयोगकर्ताको नजरमा पर्नबाट रोक्नका लागि नयाँ फिचर ल्याएको छ । उत्तः फिचरको नाम सेन्सेटिभिटी स्क्रिन हो । उक्त फिचरले आपत्तिजनक तस्वीर तथा भिडियो थम्बनेल्सलाई ब्लर गर्नेछ । प्रयोगकर्ताले त्यसमा क्लिक गरेपछि मात्र ती तस्वीर तथा भिडियो देखिनेछन् । यस फिचर सुरु भएसँगै अब आफैलाई चोट पूराउने तथा आत्महत्या
मूल्य नपाएपछि मुला र बन्दा खेतिमाथि डोजर
१२ माघ, चितवन । बजार मूल्यभन्दा पन्ध्र गुणा कम मूल्यमा पनि विचौलिया दलालहरुले लगाएको तरकारी नउठाएपछि पूर्वी चितवनका एक तरकारी किसानले आफ्नो तरकारी वारीमा डोजर लगाएका छन् । खैरहनी नगरपालिका वडा नं ६ तुलसीपुरका किसान पुरन महतोले तरकारीको मुल्य नपाएको भन्दै खेतमै डोजर लगाएर तरकारी नष्ट गरे । उपभोक्ताले बजारमा प्रतिकेजी १५ रुपैयामा किनिरहेको मुला
सेयर लगानीकर्ताले अनलाइन कारोबारलाई पत्याएनन्
९ माघ, काठमाडौं । पछिल्लो समय अनलाइन कारोबारमा गए पनि सेयर बजारको हालत उस्तै छ । सेयर बजार लगातार ओरालो लागिरहेको छ । कहिलेकाहीँ उकालो लाग्दा पनि झिनो अंकले मात्रै वृद्धि देखिने गरेको छ । सेयर बजार घट्नु वा बढ्नु त सामान्य प्रक्रिया नै हो । तर, यहाँ हामीले चर्चा गर्न खोजेको विषयचाहिँ अनलाइन कारोबार
कस्ता–कस्ता कामका लागि पाइन्छ ऋण? बाँके, खजुराकी लक्ष्मीकुमारी केसीले एक महिनाअघि सहुलियत व्याजको ऋण लिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा आवेदन दिइन्। महिलालाई व्यवसाय गर्न सस्तो व्याजमा ऋण पाइने थाहा पाएपछि उनले आफूले सञ्चालन गर्दै आएको लक्ष्मी टेलर्स एन्ड ब्युटीपार्लरमै लगानी थप्ने निधो गरेकी हुन्। आवेदन दिएको केही सातामै उनको आठ लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भयो। उक्त
ह्याक होला वाइफाई – सुरक्षाका लागि यस्तो गर्नुहोस्
वाइफाई सम्बन्धि उच्च प्राविधिक ज्ञान भएकाहरुले वाइफाई ह्याक सजिलै गर्न सक्छन । अझ प्राविधिक ज्ञान खासै नभएकाले पनि इन्टरनेटमा उपलब्ध विभिन्न सफ्टवेयरहरुको सहयोगबाट तपाईंको वाइफाई ह्याक गर्न सक्छन । आफ्नो वाइफाईको सुरक्षा गर्नका लागि यी कुराहरु ध्यानमा राख्नुहोस् : १. WPS अप्सन अफ् गर्नुहोस् राउटरको एडमिन पेज खोलेर त्यहाँ भएको WPS अप्सनलाई तुरुन्तै अफ् गर्नुहोस्
स्मार्टफोन भन्नु कि ट्याब्लेट, जे बनायो त्यही बन्ने किसिमको स्मार्टफोन अथवा ट्याब्लेट रोयोल नाम गरेको कम्पनीले रिलिज गरेको छ । यस स्मार्टफोनको नाम हो रोयोल फ्लेक्स पाई । यो स्मार्टफोनमा फोल्ड गर्न मिल्ने डिस्प्ले राखिएको छ । फोल्ड गरे पछि यस स्मार्टफोनलाई साधारण स्मार्टफोन जसरी नै चलाउन मिल्छ भने फोल्ड हटाएपछि यस स्मार्टफोनलाई ट्याब्लेट जसरी
रिडी मेलामा सात करोड कारोवार, दुई लाखले अवलोकन गरे
६ माघ, गुल्मी । तीन जिल्लाको संगम क्षेत्र रिडीमा माघे संक्रान्तीको अवसरमा चलेको मेलामा ७ करोड बढीको कारोवार भएको आयोजकले जनाएको छ । नेपालका चारधाम मध्येको एक रुरु क्षेत्रमा लाग्ने माघी मेलाको दुई लाख ५० हजार बढीले अवलोकन, दर्शन गरेको रुरु फ्रेण्ड क्लवका अध्यक्ष रामलाल विश्वकर्माले बताए । गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्गजाको संगमस्थल रुरु गाउँपालिकाको
६ माघ, हेटौँडा । ठेलामा व्यापार गरेर महिनामा रु एक लाखसम्म कमाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् नवलपरासी घर भई हाल हेटौंडामा ठेला किचेन चलाएर बसेका ३५ बर्षीय युवराज नेपाल । वैदशिक रोजगारको सिलसिलामा मलेशियामा थुप्रै हण्डर खाएका युवराजलाई चितवनमा कुखुरा फार्मले पनि डुबायो । फेरि दुबई गएका उनलाई एक वर्षको बसाइले कहिल्यै विदेश नजाने